VIRTUAL AUDIO CABLE - FOMBA TSOTRA AHAFAHANA MANORATRA FEO AVY AMIN'NY ORDINATERA - WINDOWS - 2019
Virtual Audio Cable - fomba tsotra ahafahana manoratra feo avy amin'ny ordinatera
Raha mila mila manoratra feo na ordinatera ianao, dia misy fomba maro ahafahana manao azy ireo, izay nalaza indrindra tao amin'ny "Ahoana ny fanoratana feo avy amin'ny ordinatera".
Na izany aza, amin'ny fitaovana sasany dia mitranga ireo fomba ireo tsy ampiasaina. Amin'ity tranga ity, afaka mampiasa ny VB Audio Virtual Cable (VB-Cable) ianao - programa maimaim-poana izay mametraka fitaovana an-tsarimihetsika virtoaly izay mamela anao hanoratra bebe kokoa ny feo amina solosaina.
Fametrahana sy fampiasa ny VB-CABLE Virtual Audio Device
Ny Virtual Audio Cable dia mora ampiasaina, raha fantatrao hoe aiza ny rafitra (mikrôfa) sy ny fitaovana famerenam-peo dia natsangana ao amin'ny rafitra na programa ampiasainao ho an'ny fanoratana.
Fanamarihana: misy programa hafa mitovy, antsoina koa hoe Virtual Audio Cable, mivoatra kokoa, nefa karama, miresaka an'izany aho mba tsy hisy fisaritahana: izany no dikan-teny malalaky ny VB-Audio Virtual Cable izay heverina eto.
Ireto manaraka ireto ny dingana fametrahana ny programa amin'ny Windows 10, 8.1 ary Windows 7
Voalohany indrindra, mila mandefa Virtual Cable avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny // //www.vb-audio.com/Cable/index.htm ary mamafa ny arisiva.
Aorian'izany dia mihazakazaha (tsy maintsy atao amin'ny anaran'ny Administrator) VBCABLE_Setup_x64.exe (ho an'ny 64-bit Windows) na VBCABLE_Setup.exe (32-bit).
Tsindrio ny bokotra Install Driver.
Ampamarino ny fametrahana ny mpamily, ary ao amin'ny varavarankely manaraka dia tsindrio "OK".
Hisy bitsika hanombohana ny solosaina - izany dia ho anao, raha ny fisedrana ahy dia tsy niasa intsony izy io.
Ity rindranasa Virtual Virtual ity dia napetraka ao amin'ny ordinatera (raha toa ka manadino ny feo ianao amin'izao fotoana izao - aza manahy, manova ny fitaovana famerenam-peo an-tariby ao amin'ny famolavolana audio) ary azonao ampiasaina izany mba hanoratana ny feo izay nilalao.
Mandehana any amin'ny lisitry ny fitaovana famerenana (Ao amin'ny Windows 7 sy 8.1 - Tsindrio havanana amin'ny raki-pitenenana - ny fitaovana famerenana playback. Ao amin'ny Windows 10, azonao atao ny mametaka ankavanana amin'ny sora-pitenenana miteny ao amin'ny faritra fampandrenesana, misafidiana "Sounds", ary tongava any amin'ny tabilao "Playback" ").
Tsindrio ny bokotra ankavanana amin'ny fidirana Cable ary mifidiana "Mampiasa Default."
Taorian'izany, na asehoy ny takelaka Cable ho toy ny fitaovana fanoratana an-tsoratra (eo amin'ny tabilao "Recording"), na mifidiana ity fitaovana ity ho mikrô amin'ny programa famoahana feo.
Amin'izao fotoana izao, ny feo heno ao amin'ny fandaharana dia alefa mankany amin'ny ordinateur Cable Output virtuel, izay ao anatin'ny programa handraisana feo dia hiasa toy ny mikrônôma mahazatra ary, araka izany, dia asehoy ny feo mihira. Na dia izany aza, misy ny tsy fahampian-tsakafo: mandritra izany dia tsy hihaino izay zavatra asehonao ianao (ie, ny feo fa tsy ny mpandahateny na ny fitaovana an-telefaona dia alefa any amin'ny fitaovana virtoaly virtoaly).
Raha hanaisotra ny fitaovana virtoaly dia mandehana any amin'ny rindrambaiko fanaraha-maso - programa sy fitaovana, esory ny VB-Cable ary atsangano ny solosaina.
Ity mpandrindra ity dia manana rindrambaiko maimaim-poana be ihany koa amin'ny fiasana amin'ny feo, izay mety, anisan'izany ny famoahana feo avy amin'ny solosaina (anisan'izany ny loharano maro samihafa indray mandeha, miaraka amin'ny fahafahana mihaino mihaino) - Voicemeeter.
Raha toa ka tsy sarotra aminao ny mahatakatra ny takelaka Anglisy sy ny paikady, dia vakio ny fanampiana - Manoro hevitra aho mba hamaha azy.